सीपीएलः चौथो खेलमा सन्दीप आवद्ध बार्बाडोसको शानदार जित - Everest Dainik - News from Nepal
सीपीएलः चौथो खेलमा सन्दीप आवद्ध बार्बाडोसको शानदार जित
काठमाडौंः क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) अन्तर्गत सेन्ट लुसिया जुक्सविरुद्धको खेलमा सन्दीपआवद्ध बार्बाडोस ट्रिडेन्ट ७१ रनले विजयी भएको छ ।
सन्दीपको टिमले दिएको १७३ रनको लक्ष्य पछ्याएको जुक्सले १४.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १०१ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
उसका लागि हार्दुस् भिल्जोइनले सर्बाधिक ३१, कोलिन डी ग्रान्डहोमले २८ र आन्द्रे फेलेचरले १४ रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।
बलिङमा बार्बाडोसका जसन होल्डर, जोसुवा विश्वपले २–२, सन्दीप लामिछाने, जोश लालोर र रेमोन रिफरले एक–एक विकेट लिए ।
कस्तो रह्यो सन्दीपको ३.५ ओभर?
सेन्ट लुसिया जुक्सविरुद्ध अन्तिम ओभरमा सन्दीप मंहगा सावित भए । उनले यो ओभरमा एक विकेटसहित १६ रन दिए । जसमा २ छक्का, ३ रन र सिंगल रन सामेल थियो । यसअघि उनले तेस्रो ओभरमा बिनाविकेट २ रन दिए ।
याे पनि पढ्नुस सीपीएलः यस्तो रह्यो सन्दीपको दोस्रो ओभर
सन्दीपले यो ओभरको पहिलो र पाँचौ बलमा सिंगल रन दिए । सन्दीपले दोस्रो ओभरमा रनआउटसहित ७ रन दिएका थिए ।
उनले यो ओभरमो पहिलो बलमा ४ चौका रन दिए । सन्दीपले आफ्नो दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा क्याच आउटको मौका दिए पनि जेपि डुनिमीले क्याच गर्न सकेनन् । जसले गर्दा उनले पहिलो बलमा चार रन खर्चिए ।
याे पनि पढ्नुस सीपीएलः कस्तो रह्यो गुयानाविरुद्ध सन्दीपको ३ ओभर?
सन्दीपले पहिलो बलमा ४ रन दिएका थिए । उनले आफ्नो दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा क्याच आउटको मौका दिए पनि जेपि डुनिमीले क्याच गर्न सकेनन् । जसले गर्दा सन्दीपले पहिलो बलमा चार रन खर्चिए ।
उनले दोस्रो बल डट, तेस्रो बलमा कोलिन डी ग्रान्डहोमको रन आउट, चौथो बलमा डट, पाँचौमा २ र अन्तिम बलमा एक रन दिए ।
यसअघि सातौं ओभरमा बलिङ गर्न आएका सन्दीपले ४ सिंगल रन दिए । उनले २ बल डट फालेका थिए ।
सन्दीपले आफ्नो तेस्रो बलमा रनआउटको मौका गुमाउन पुगे । उनले ३ ओभरमा बलिङ गर्दा बिनाविकेट १३ रन दिए । आजको खेलमा सन्दीपले ३.५ ओभरमा २८ रन दिएर १ विकेट लिए ।
याे पनि पढ्नुस ‘द हन्ड्रेड’ क्रिकेटको ड्राफ्टमा सन्दीप, मूल्य एक करोड ३९ लाख
यसअघि टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको बार्बाडोसले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १७२ रन बनायो ।
उसका लागि जस्टिन ग्रेभ्सले ५७, जनसन चाल्सले २८, जनाथन कार्टरले ३०, जेपी डुमिनीले १८, एश्ले नर्सले १५, कप्तान जसन होल्डरले नटआउट १० रन बनाए ।
बलिङमा लुसिया जुक्सका किस्रीक विलियम्सले ३, ओबीड म्याकओईले २, रहकीम क्रोनवालले एक विकेट लिए । सन्दीपको टिमको पाँचौ खेल २३ सेप्टेम्बर गुयाना अमेजन वारियर्सविरुद्ध छ ।
ट्याग्स: सन्दीप लामिछाने, सीपीएल